भत्ताको व्यथा | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← अब पाँच पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापकको सरुवा
रेल कुदाउन चीन आतुर →
धनगढी : हातमा लौरो, काँपिरहेको शरीर, कमजोर आँखा । कृषि विकास बैंक कैलाली शाखा परिसरमा सयौं ज्येष्ठ नागरिकको लाममा ९० वर्षीय कालीप्रसाद चौधरी चर्को घाममा लामबद्ध थिए । अघिपछि उभिएका ज्येष्ठ नागरिकसँग अडेस लागेर उभिएका चौधरीको हातमा ८ हजार रुपैयाँको चेक थियो । ‘९० वर्षको भएँ । चार महिनाको भत्ता लिन बैंकमै आएको हुँ’, मसिनो बोलीमा उनले भने, ‘नजिकैको वडा कार्यालयबाट वितरण गरिदिएको भए कति सहज हुन्थ्यो ? ’चौधरी आफूले भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोशित देखिन्थे । उनले भने, ‘वृद्धभत्ता घरघरमै पु¥याइदिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरेका जनप्रतिनिधि अहिले कुन्नि काँ गए ? ’
धनगढी उपमहानगरपालिका–३ की ८० वर्षीया रूपादेवी गिरी बैंकको पश्चिमतिरको गेटबाट लाम छिचोल्दै भित्र छिर्ने प्रयासमा थिइन् । नजिकै रहेका गार्डले भने, ‘आमा त्यो लाइनमा लाग्नुस् ।’ती वृद्धाले लाम नियालिन् र सुइड्ढय सुस्केरा हाल्दै भनिन्, ‘ओहो ! त्यो सकसपूर्ण लाममा फेरि कसरी लाग्नु ? हिजो पालो नपुगेर फर्कें, आज पनि त्यत्रो लाम ।’
रूपादेवी असिनपसिन अनुहारसहित टाउकोमा सल हालेर सय जनाभन्दा बढीको लामको अन्तिममा गइन् र थचक्क बसिन् । ‘आज पनि भत्ता नदिए म घरै जान्नँ’, उनले भनिन् ।
कालीप्रसाद र रूपादेवी मात्रै होइन, आइतबारदेखि वितरण भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंकमा लाम लागेका धेरै वृद्धवृद्धा सकस भोग्न बाध्य छन् । ‘म उभिन सक्दिनँ । लडेर मेरो ढाड भाँच्चिएको छ । मलाई लाममा नबसी रकम दिनुप¥यो,’ ७८ वर्षका कृतबहादुर तामाङले भने । तर उनको गुनासो सुन्ने कोही थिएन त्यहाँ ।
एकजना सहयोगीसहित आएका तामाङ लाम लागे । सहयोगीले उनलाई आफ्नो छातीमा अड्याए । तामाङले भने, ‘सरकार ! हामीलाई वडामै रकम दिने व्यवस्था गरिदेऊ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाले मंसिरदेखि फागुनसम्मको ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाभत्ता कृषि विकास बैंकका शाखा कैलाली पुल र क्याम्पस रोडबाट वितरण गरिरहेको छ । अघिल्लो दिन लाम लागेर पालो नआएका धेरै वृद्धवृद्धा भोलिपल्ट फेरि लाममा बसेका थिए ।
‘हिजो ९ बजे लाममा लागेको थिएँ । २ बजेपछि बैंक बन्द भयो भनेर सटर तानिदियो । फर्केर गएँ, आज फेरि लाममा लागेकी छु’, देवी देउवाले भनिन् । ‘तपार्इंको घरमै वृद्धभत्ता ल्याइदिन्छौं भन्ने नेता कहाँ गए होलान् ? ’
हरेक वडामा सुरक्षा चौकी भएको धनगढी उपमहानगरपालिकामा भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि वृद्धवृद्धाले सकस भोग्नुपरिरहेको ज्येष्ठ नागरिक लोकबहादुर कोलीले बताए । ‘वृद्ध भत्ता बढाउँछु भन्नेले बढाएनन् । अब यस्तो लामो लाम छिचोलेर बैंकको काउन्टरसम्म पुग्ने कसरी ? ’ उनले गुनासो गरे ।
कृषि विकास बैंकका दुवै शाखामा पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, लाम बस्न नसकेर पल्टिरहेका देखिन्थे भने उनीहरूका साथमा आएका आफन्त सहारा दिइरहेका थिए ।
‘बिरामी छन्, लाममा उभिन सक्दैनन् । औंठाछाप लगाएर ल्याए पनि बैंकले मान्दैन । त्यसैले बाजेलाई बोकेर उभिइरहेकी छु’, धनगढी नगरपालिका १२ की शान्ति चौधरीले भनिन् । ‘गाउँगाउँमा भत्ता पु¥याउने चुनावी बाचा गरेका जनप्रतिनिधिलाई अहिले यी ज्येष्ठ नागरिकले पाएको सकस’bout चासो छैन ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई ज्येष्ठ नागरिकको यो सकस राम्ररी थाहा छ । तर उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज रुपमा उपलब्ध गराउन कुनै कदम चालेका छैनन् । ‘मलाई ज्येष्ठ नागरिकको त्यो सकस थाहा छ, तर सबै वडामा बैंक नभएका कारण समस्या समाधान गर्न असमर्थ छौं । यस’bout कार्यपालिकामा कुरा उठेको छ । अर्को बैठकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडामै वितरण गर्ने प्रस्ताव लैजानेछु’, उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सशुीला भट्टले भनिन् ।
उपमहानगरपालिकाले फूलबारी र उर्माका ज्येष्ठ नागरिकलाई कञ्चन विकास बैंकबाट र अन्य ठाउँका जेष्ठ नागरिकलाई लागि कृषि विकास बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको छ ।(अन्नपूर्ण )